Sezvo miganhu yakavhurwa zvakare, Zurich Tourism inoita kuti kuchengetedza kuve kwekutanga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Switzerland Nhau » Sezvo miganhu yakavhurwa zvakare, Zurich Tourism inoita kuti kuchengetedza kuve kwekutanga
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Switzerland Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zvidzidzo kubva pakutanga uye panguva ye COVID-19 denda zvakaratidza kuramba kuchikurumidza kwekushanya kuti kuve kwakasimba
Zürich anotanga pachikuva chakashinga uye chinosanganisira kusimudzira kune ramangwana
Zürich Tourism inochengetedza kuzvipira kwakasimba mukusimudzira kwakasimba
Zürich Tourism inoramba ichisimudzira ruzivo nezvekusimudzira kweeconomic
Sezvo nyika inotanga kuvhura miganhu yayo kune zvekushanya, zvidzidzo kubva kare uye panguva ye COVID-19 denda zvakaratidza kuenderera kwekurumidziro kwekushanya kuti igare yakasimba. Kusvikira izvozvi, guta reZurich, pamwe neSwitzerland izere, rakatanga danho rakashinga uye rinosanganisira yekusimudzira remangwana.
Zürich Tourism inochengetedza kuzvipira kwakasimba mukusimudzira kwakasimba uye yanga ichitungamira nemuenzaniso kubvira 1998. Sangano rakaratidza chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru muna 2010, apo yaive pakati pevokutanga kusaina Switzerland Tourism Sustainability Charter, uye muna 2015, Zürich Tourism yakasimbisazve kuzvipira uku. pamwe nekuvandudzwa kweiyo yakazara Sustainability Concept 2015+, iyo inogadza inovimbika uye ine chinzvimbo mune ramangwana zvinangwa. Nekuenderera mberi nekusimudzira ruzivo nezve kusimudzira eco-kuziva, Zürich Tourism inovhara zvitatu zvakakura zvekusimudzira: nharaunda, hupfumi uye nzanga. Pamwe chete neguta necanton, Zürich Tourism yakatora nzira yakazara uye yenguva refu kuchinangwa chekumisa Zurich nenzvimbo dzakatenderedza sechirongwa chepasi rose cheSmart Destination. Pamwoyo penzira yeZurich yakagadzikana ndeiyi:
Kunyangwe vashanyi vari kutsvaga 100% organic, yemuno yakasungwa uye mwaka zvigadzirwa, kana zvachose vegan, zviri nyore kuwana zvinonaka uye zvinogara zvinodyiwa muZurich. Mahotera mazhinji muguta anokoshesa zvikuru mavambo nemwaka wezvibereko zvavanoshandisa, uye vafudzi vazhinji vanotenga zvigadzirwa zvavo kubva kune imwe yemisika zhinji yeZurich yevhiki nevhiki.
Pamusoro pezvo, Zurich ndiyo nzvimbo yekuzvarwa inodadisa yeresitorendi yekutanga yepasirose, inemhuri yeHiltl, ine maresitorendi akapihwa chikafu chevadyiwi kubvira 1898. Vekudyara vevheji uye vegan ndevamwe vanozivikanwa muZurich.
Sezvo vafambi vanodzokera kumashure pasirese-COVID, ivo vanozokweverwa kunzvimbo dzisina vanhu vakawanda, dzakashama-dzakavhurika nzvimbo. Kunyangwe Zurich iri guta hombe, ine mugove wayo wakaringana wepasi-iyo-yakarohwa-nzira nzvimbo uye kwete-nguva dzose-yakavhurika tsika oases. Vafambi vemaguta havazovhiringidzwa nenzvimbo dzakawanda dzakavanzika-mumoyo meguta, kubva kumagadheni akagadzirwa zvakaenzana kusvika kumasangano eruzhinji akanaka.
Kunyangwe vanhu veko vachizivana navo, vashanyi vazhinji havazive kuti idzi nzvimbo dzakanaka dziripo, zvichiita kushanya kuZurich kwakanyanya kukosha uye kusatarisirwa. Dzimwe dzenzvimbo idzi hadzisi dzakananga munzira dzevashanyi kana nemaawa ekuvhura akasarudzika. Asi ivo vanokodzera kutsvaga, nekupa mubayiro vasina kutya vafambi veguta vane zvakanaka zvinoonekwa uye nemaonero akanaka.
Vafambi vane hushamwari nezvehupfumi vanogona zvakare kuwana akasiyana siyana ezvitoro zvinotengesa zvakatengeswa uye zvakagadzirwa zvine mutsindo fashoni, pamwe neanoverengeka zero-marara zvitoro. Sezvo chishuwo chekupfeka chinogadzirwa nezvakatipoteredza chiri kuramba chichiwanda, vagadziri vari kuve nechokwadi chekuti fashoni yavo inogadzirwa nenzira inochengetedza uye isina tsarukano, vachishandisa machira anoshandiswazve, kudzikisira tsoka dzadzo dzekabhoni nekubata vashandi zvakaenzana. Vatengi vane pfungwa dzezvemamiriro ekunze vanogona kuwana dzakasiyana siyana zero-tsvina zvitoro - mabhizinesi akatsaurirwa kudzikisira chikafu chekudya nezvitoro zvakapa zvachose kupakurwa kwega.
Basa uye Kutandara:
Sezvo vashandi vepasirese pasirese vachichinja kubva kubasa rekure kure kuenda mu - hofisi, mabhizinesi ari kutotanga kuchinjisa kune idzva rebasa-hupenyu hupenyu. MuZurich, bhizinesi uye zororo zvinogona kusanganiswa zvinoshamisa munzvimbo dzekushandira pamwe, maresitorendi nemaresitorendi. Mune dzaimbove dzimba dzefekitori, mune chitoro chemabhuku, kana pasi pejanji viaduct: Zurich's digital nomads vanosangana nedzimwe pfungwa dzevechidiki mudanho rekutanga, uye kutenderera pfungwa nyowani munzvimbo dzekugadzira dzekudyidzana dzekushandira pamwe nemakamuri.
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, Zurich ine akati wandei emamwe mapurojekiti ekuziva zvakatipoteredza ari kuitika, anosanganisira magetsi-anoshanda zvivakwa, chirongwa chekurasa chikafu cheindasitiri yekugamuchira vaeni uye chirongwa cheguta e-bhasikoro. Kubva mukushanya kune zvivakwa uye kuchengetedzwa kwemvura, Zurich iri pamucheto wetekinoroji yakagadzikana inotarisa kune ramangwana rakajeka uye rine hutano.
US - Canada muganho kuvhurazve a no-go